Custom PB2000V-PB6000V Vacuum karazana fanakanana milina famolavolana mpanamboatra sy mpamatsy | Dongshen
EPS Vacuum Block Molding Machine dia milina EPS mahomby hanaovana sakana EPS. Ny sakana EPS dia azo tapahina amin'ny takelaka hanaovana insul trano na fonosana. Vokatra malaza vita amin'ny takelaka EPS dia takelaka sandwich EPS, panneaux 3D, panneaux insulation rindrina anatiny sy ivelany, fonosana fitaratra, fanaka fanaka sns.
Ny milina famolavolana volo EPS vovoka dia afaka mamokatra sakana EPS avo lenta, miasa amin'ny tsingerina haingana, ary ny sakana rehetra dia mahitsy sy matanjaka ary marefo amin'ny rano ambany. Ny milina dia afaka manamboatra sakana ambany ihany koa miaraka amina kalitao tsara. Izy io dia afaka manao hakitroka avo amin'ny 40g / l ary ambany hakiho amin'ny 4g / l.
EPS Vacuum Block Molding Machine feno vatana masinina lehibe, boaty fanaraha-maso, rafitra banga, rafitra mandanjalanja sns.
Tombony tombotsoan'ny EPS Block M Machine
1.Machine dia vita amin'ny fantsona toradroa mahery sy takelaka vy matevina;
2.Machine dia mampiasa takelaka etona 5mm matevina misy fonosana Teflon. Ary eo ambanin'ny takelaka aliminioma, ny tohana lehibe kokoa misy habe kokoa dia apetraka mba hisorohana ny fihoaran'ny takelaka aluminium amin'ny tsindry mafy. Ny takelaka aluminium dia tsy miova endrika aorian'ny niasa folo taona;
3. Ireo tontonana enina an'ny masinina dia amin'ny alàlan'ny fitsaboana hafanana mba hamoahana ny adin-tsaina, ka tsy afaka miovaova ny mari-pana eo ambanin'ny mari-pana avo;
4.Machine misy tsipika etona misimisy kokoa mba hahazoana antoka ny fikolokoloana na dia amin'ny sakana aza, noho izany dia tsara kokoa ny fampifangaroana;
5.Ny takelaka masinina dia miaraka amin'ny rafi-pitetezana tsara kokoa noho izany ka maina kokoa ny sakana ary azo tapahina amin'ny fotoana fohy;
6. Ny takelaka masinina rehetra amin'ny alàlan'ny fanesorana ny harafesina, ny famafazana baolina, avy eo manao sary miady amin'ny harafesina sy ny sary hosodoko, ka tsy mora ny harafesina ny vatan'ny masinina;
7.Machine dia mampiasa rafitra fantsom-pandrefesana maranitra sy fizotry ny fikolokoloana, ahazoana antoka ny fampifangaroana ireo sakana ho an'ny hakitroka avo sy ambany hakitroka;
8. Rafitra famenoana haingana sy rafitra fantsom-pahombiazana miantoka ny masinina miasa haingana, isaky ny sakana 4 ~ 8 minitra;
9.Eject dia fehezin'ny paompy hydraulic, ka ny ejectors rehetra dia manosika sy miverina amin'ny hafainganam-pandeha mitovy;
10.Most ny ankamaroan'ny singa ampiasaina ao amin'ny masinina dia vokatra na marika marika malaza.
Valin'ny haben'ny bobongolo
Kg / tsingerina
m³ / tsingerina
Rano mangatsiaka vacuum
Toeram-pialana amin'ny rivotra
Fahafahana 15kg / m³
Min / tsingerina
Ampifandraiso ny entana / hery
Teo aloha: PB2000A-PB6000A Milina fanamafisam-peo milina fanenomana
Manaraka: SPY90-SPY120 Mpanaparitaka mitohy